सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, के छ कार्यक्रममा ? (पूर्णपाठ) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, के छ कार्यक्रममा ? (पूर्णपाठ)
प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०७६, शुक्रबार
काठमाडौं । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्यसहित विभिन्न महत्वकांक्षाी योजनाहरु आफ्नाे नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज (शुक्रबार) संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुने दाबी गरेकी छन् । सन् २०३० अघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा पुग्ने र विक्रम संवत् २१०० भित्र उच्च मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । चार वर्षभित्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारका तर्फबाट ठूला आयोजना प्रवर्धन गर्ने र लगानीका लागि नागरिकलाई आव्हान गर्ने सरकारको योजना छ । लामो समयदेखि अधुरा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धा्रित समयमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले योजना बनाएको छ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षको शुरुबाटै र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को शुरुबाट सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना र लक्ष्य छ । निजगढको शुरुवात आउँदो वर्षबाट हुने राष्ट्रपति भण्डारीले संसदबाट जानकारी गराइन् । भेरी बबई डाइभर्सन् बहुद्देश्यीय आयोजना अबको २ वर्षभित्र सक्ने महत्वकांक्षी योजना सरकारको छ । सिक्टा सिँचाई आयोजनाको काम चार वर्षमा सक्ने र रानी–जमरा–गुलरिया आयोजनाको पहिलो चरणको काम सक्ने सरकारको दाबी छ ।
चार वर्षभित्रमा पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण सक्ने भण्डारीले बताइन् । यसै गरी जोमसोम–कोराला सडक बाह्रै महिना चलाउने र कोशी तथा कर्णाली कोरिडोरको ट्रयाक खोलिसक्ने सरकारको दाबी छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण शुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन् ।
गामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने सरकारको दाबी गरिएको छ । कर भुक्तानी लागत घटाउने र विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गर्ने भण्डारीले उल्लेख गरिन् । उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकर्ता र उत्पादन लागत न्यूनीकरणको योजनना अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।
जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको शुरुवात गर्ने सरकारको योजना छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई सहजरुपमा नेपाल प्रवेशको बाटो तय हुने सरकारको दाबी छ । आगामी वर्ष सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र चार वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट नवलपरासीबाट फलाम खानीलाई व्यवसायिकरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ। बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी छन् । सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य उद्योग बनाउने सरकारको योजना छ ।